Lentem condom (penis sleeve) – MM Online Shopping
Lentem condom (penis sleeve)
both unicode & zawgyi code version
အစှပျအရှညျ စုစုပေါငျး 120 mm (4.7 inches)
အသားပို 10 mm
လိငျတနျထညျလို့ရသောအရှညျ 110 mm (4.5 inches)
လိငျတနျအရှညျအစား ၄ခှဲသမားတှကေ့ ကှကျတိကပြါမယျ
လိငျတနျအရှညျအစား ၆လကျမ သမားတှကေ့တော့ လိငျတနျအရငျးနားမှာ အသားနညျးနညျးပိုနပေါမယျ.
အစှပျကိုယျထညျက အနညျးငယျထူသောကွောငျ့ သငျ့ညီဘှားကို လကျရှိထကျပိုကွီးလာစပေါတယျ .
ဆှဲကယျြဖွဈသောကွောငျ့ လိငျတနျနဲ့ကှကျတိကစြပွေီး သငျ့ရဲ့ စှမျးဆောငျရညျကို ပိုကောငျးစပေါတယျ.
ရိုးရှငျးပမေယျ မိမိရဲ့ စှမျးဆောငျရညျကို အပွညျ့အဝ အထောကျအကူပမေယျ ဒီဇိုငျးမြိုး ဖနျတီးထားပေးပါတယျ .
ငယျပါကို ထိနျးတဲ့ဂှငျးပါသောကွောငျ့ သှေးစီးဆငျးမူကို ကနျ့သတျထားသလို့ဖွဈပွီး ထောငျမတျမူကို ပိုကောငျးစပေါတယျ.ခြောဆီပါပါတယျ
မှတျခကျြ .ငယျပါတှငျ တပျသောကှငျး ၊ လိငျတနျအရငျးတှငျ တပျသော ဂှငျးတိုငျးသညျ သှေးစီးဆငျးမူကို ထိနျးထားသဖွငျ့ သုတျထှကျနူနျးကို ပိုကွာစပွေီး .ထောငျမတျမူကို ပိုကောငျးစပေါတယျ ဒါပမေယျ ဒီလို့ကှငျးမြိုးကို အသုံးပွုမညျဆိုပါက လကျရှိထကျ မိနဈ ၂၀ ဝနျးကငျြလောကျပဲ တပျထားပါ ပွီးရငျ ပွနျဖွုတျပွီး ပွနျတပျလို့ရပါတယျ .. တပျဆငျခြိနျ အရမျးကွာမွငျ့ပါက .. လိငျတနျတှငျသှေးကွော ပိတျဆို့မူမြားဖွဈပွီး မလိုလားအပျသော ပွဿနာမြားဖွဈပျေါလာနိုငျပါတယျ .အကယျ၍ မိမိအနနေဲ့ အသုံးပွုရတာ သကျတောငျ့သကျသာဖွဈတယျဆို ဆကျလကျအသုံးပွုနိုငျပါတယျ အသုံးပွုရတာ အရမျး တငျးကွပျသလို့ ခံစားရပါက ခကျြခငျြးပွနျခြှတျပေးပါ .
အစွပ်အရှည် စုစုပေါင်း 120 mm (4.7 inches)
လိင်တန်ထည်လို့ရသောအရှည် 110 mm (4.5 inches)
လိင်တန်အရှည်အစား ၄ခွဲသမားတွေ့က ကွက်တိကျပါမယ်
လိင်တန်အရှည်အစား ၆လက်မ သမားတွေ့ကတော့ လိင်တန်အရင်းနားမှာ အသားနည်းနည်းပိုနေပါမယ်.
အစွပ်ကိုယ်ထည်က အနည်းငယ်ထူသောကြောင့် သင့်ညီဘွားကို လက်ရှိထက်ပိုကြီးလာစေပါတယ် .
ဆွဲကျယ်ဖြစ်သောကြောင့် လိင်တန်နဲ့ကွက်တိကျစေပြီး သင့်ရဲ့ စွမ်းဆောင်ရည်ကို ပိုကောင်းစေပါတယ်.
ရိုးရှင်းပေမယ် မိမိရဲ့ စွမ်းဆောင်ရည်ကို အပြည့်အ၀ အထောက်အကူပေမယ် ဒီဇိုင်းမျိုး ဖန်တီးထားပေးပါတယ် .
ငယ်ပါကို ထိန်းတဲ့ဂွင်းပါသောကြောင့် သွေးစီးဆင်းမူကို ကန့်သတ်ထားသလို့ဖြစ်ပြီး ထောင်မတ်မူကို ပိုကောင်းစေပါတယ်.
မှတ်ချက် .ငယ်ပါတွင် တပ်သောကွင်း ၊ လိင်တန်အရင်းတွင် တပ်သော ဂွင်းတိုင်းသည် သွေးစီးဆင်းမူကို ထိန်းထားသဖြင့် သုတ်ထွက်နူန်းကို ပိုကြာစေပြီး .ထောင်မတ်မူကို ပိုကောင်းစေပါတယ် ဒါပေမယ် ဒီလို့ကွင်းမျိုးကို အသုံးပြုမည်ဆိုပါက လက်ရှိထက် မိနစ် ၂၀ ၀န်းကျင်လောက်ပဲ တပ်ထားပါ ပြီး၇င် ပြန်ဖြုတ်ပြီး ပြန်တပ်လို့ရပါတယ် .. တပ်ဆင်ချိန် အရမ်းကြာမြင့်ပါက .. လိင်တန်တွင်သွေးကြော ပိတ်ဆို့မူများဖြစ်ပြီး မလိုလားအပ်သော ပြဿနာများဖြစ်ပေါ်လာနိုင်ပါတယ် .အကယ်၍ မိမိအနေနဲ့ အသုံးပြုရတာ သက်တောင့်သက်သာဖြစ်တယ်ဆို ဆက်လက်အသုံးပြုနိုင်ပါတယ် အသုံးပြုရတာ အရမ်း တင်းကြပ်သလို့ ခံစားရပါက ချက်ချင်းပြန်ချွတ်ပေးပါ .ချောဆီပါပါတယ်
tem type:Penis Sleeves
Package Include:All Products
Be the first to review “Lentem condom (penis sleeve)” Cancel reply
Vibrator နှင့် နောက်ထိမ်းပါ တစ်ဝက်စွပ်
vibration lock fine ring